पुनर्जागरण शैली - युरोप मा 15-16 शताब्दीयौंदेखि को पालो मा त्यहाँ एक पूर्ण नयाँ प्रणाली वास्तुकला थियो। अर्को तरिका, तपाईंले थाह छ, यो समय - को पुनर्जागरण। यो समय परिवर्तन र को वास्तुकला विलय र बाहिर बाट आउने स्थानीय परम्परा र नयाँ रुझान को आपसी प्रभाव फलस्वरूप सुधार। पुनर्जागरण - यो अविश्वसनीय मात्र होइन कला तर पनि लगभग सबै युरोपेली देशहरूको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। यो व्यापार मार्गहरू, नयाँ औद्योगिक र व्यापार केन्द्र को गठन को क्षेत्र मा जोड मा एक बदलाव हदसम्म कारण बाल्कन टर्की प्रभाव, संस्कृति र विचारधारा मा मौलिक परिवर्तन अझ बलियो कारण अमेरिकी महादेशमा को खोज थियो।
यस पुनर्जागरण समयमा, यो निकै विस्तार भएको थियो र संसारको अझ बलियो ज्ञान, संसार र समाजमा मानिसको भूमिका ठूलो ध्यान गरिएको छ। आदर्श मानिस अब - शिक्षित छ, शारीरिक रूपमा बलियो-इरादों व्यक्ति यदि आवश्यक, निर्धक्क भई आफ्नो अधिकार, परिवर्तन ठोकुवा र संसारको सुधार गर्न सक्षम छ जो। उठ्दा र नयाँ वर्ग बलियो बनाउन थाले - यो bourgeoisie, सिर्जना र आफ्नो विचारधारा लागू गर्न प्रयास गरिएको छ जो। मा विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन पूर्णतया नयाँ दिशा वास्तुकला, पाठ्यक्रम विकास, र। यी सबै क्षेत्रमा, मान्छे मा र ब्याज को लहर बताउँछन् जो प्राचीन सम्पदा, देखि repelled छन् प्राचीन कला र वास्तुकला।
मध्ययुगीन कला र निर्माण मशीनरी पुनर्जागरण वास्तुकला को उत्कृष्टता र सम्बन्धित विकास र कला को सुधार को प्रयोग बिना सम्भव थियो। यो प्रारम्भिक 15 औं सताब्दी मा एक धेरै मजबूत प्रभाव भएको छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ Byzantine वास्तुकला र शहरी योजना, जो पनि पुनर्जागरण वास्तुकला को योगदान गरे। निस्सन्देह, पुनर्जागरण को वास्तुकला एक सम्पूर्ण नयाँ, सम्पूर्ण अलग संसार वास्तुकला को विकास को चरण चाहनुभएको। उल्लेखनीय यो सांसारिक र सिविल ईन्जिनियरिङ् को मात्रा मा वृद्धि, मन्दिर र चर्च पनि फरक हेर्न थाले थियो। को 15-16 शताब्दीमा काम वास् इच्छालाई, सजावटी तत्व र वारंट-धन को प्रजनन मा व्यक्त पुरातन फारामहरू र प्रविधी पालन गर्न बाटो मा प्रत्यक्ष निर्माण।
यो प्राचीन समयमा थियो रूपमा पुनर्जागरण को वास्तुकला, सटीक, academically सही संयोजन र निर्माण विवरण र अनुपात द्वारा विशेषता थियो। को मा प्रारम्भिक पुनर्जागरण सजावटी गहने र Ornamental सजावट एक धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, तर मध्य र लेट पुनर्जागरण मा, यी तत्व को भूमिका कम छ।
को पुनर्जागरण को वास्तुकला पनि इटाली, सबै देशहरूमा समान विकास भएन - त्यहाँ राज्य को उत्तर र दक्षिण बीच महत्वपूर्ण मतभेद थिए। अर्थात् - भेनिस र देश को सम्पूर्ण उत्तरी भाग मा सजावटी प्रविधी को भूमिका धेरै ठूलो थियो।
युरोप मा हरेक देशमा यसको आफ्नै विशेषताहरु र निर्माण को peculiarities थियो। तथापि, तपाईं पहिल्याउन सक्छ र केही सामान्य लक्षण। उदाहरणका लागि, गोथिक डिजाइन को लास पत्थर नींव को एक तिरस्कार र नयाँ संरचनात्मक प्रणाली को प्राथमिकता - एउटा सरल, एकदम, लचिलो आर्थिक र पनि architect काम सुविधा। यो vaulted संरचना र ईटा को पर्खाल (पार, torispherical, जलयात्रा, टन्न भरेर, र गोलाकार घरको छानो) काठ बीम छत फर्श निर्माण मा एक आंशिक तत्व, sloped छतों मा छत प्रयोग गरेर। लागि इँटा सामना प्लास्टर, संगमरमर, पत्थर प्रयोग। यो अस्तर कला र प्लास्टिक मूल्य थियो। र कसरी सुरुदेखि दृश्यहरु र सजावट गहने लगभग सबै देशहरूमा सामान्य थिए।
एक मास्टर कलाकार एक अद्वितीय व्यक्तित्व छ जो - पुनर्जागरण वास्तुकला मात्र होइन सुन्दर र कार्यात्मक सुविधाहरु सिर्जना गर्ने, तर पनि लेखक महत्व दिनु हो। Bramante, Alberti, Brunelleschi, Bramonte, Delorme, माइकलएन्जेलो, हेरेरा, जोन्स - पुनर्जागरण वास्तुकला को दुनिया इतिहास सधैंभरि ठूलो मालिकको नाम कुँदिएको।
कला काम रूपमा दूत मूर्तिकला
को 19 औं शताब्दीको रोमान्टिक र व्यावहारिक चित्रकला
कसरी कागज मा एक मानिस को आनुपातिक छाँयामा जन्मिएको छ?
कसरी अनुपात राखन, एक खोपडी आकर्षित गर्न?
Terrine - यो के हो? चिकन को Terrine
पैसा आकर्षित गर्न प्रविधी। पैसा आकर्षित गर्न संगीत
वर्णनात्मक कारोबार: उदाहरण। प्रस्ताव वर्णनात्मक कारोबार छ
ध्यान कसरी आकर्षित गर्न
"एला ENCHANTED": अभिनेता र भूमिकाको
"Zashkvar" - यो के हो? को युवा कठबोली शब्द को अवधारणा र अर्थ
अपराधी कोड को लेख 228: को सजाय। लेख 228, भाग 1, भाग 2, आपराधिक कोड को भाग 4
हलका - वेल्स राष्ट्रिय प्रतीक
शरीर सक्रिय कार्बन कसरी सफा गर्ने?